The Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) says it has located unexplained $730 million worth of assets whose owners must explain how they acquired them or risk losing them to the State.
Thomas Mapfumo akaimba akati corruption, corruption. Batai vanhu vatongwe. Corruption inoparadza Nyika. Ngavatongwe. Hatidi corruption isu
Mukuru wecorruption ndiye anofanirwa kubatwa kwete tumatemba muchisiya mazihove
Imi ve zacc munotodawo vamwe ve zacc fti bcz amhutaure kti ndivanani itori corruption iyoyo fti
Chahototo 5 months ago
Hawataure kana vari we zanupf
Anongonzi bigwigs ndaanani tiudzei mazita ndeve zanu pf saka vachivanzwa
1 hour ago 22 Comments
13 hours ago 60 Comments